ओलीको तमासामा प्रदेश सरकार - नेपालबहस
ओलीको तमासामा प्रदेश सरकार
| १३:२९:२९ मा प्रकाशित
९ फागुन, काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओली बेला बेला तमासा देखाएको भन्दै सबैसँग आश्चार्यचकित हुन्छन् । उनको यस्तो आश्चर्य आफ्नै पूर्वसहधर्मीदेखि धारे हात लगाउने सबैप्रति समभाव देखिन्छ ।
झण्डै एक महिना अगाडि ओलीले सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए–पुनस्थापना केका लागि ? संसदमा तमासा गर्न ? त्यसको एक साता नवित्दै फेरि उनले भनेका थिए–वकिलहरु सर्वाेच्चमा गफ फिटेको फिटैछन्, हुँदाहुँदा एकजना बाजे वकिललाई लगेर तमासा गरेछन् ।
ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएवापत अहिले सर्वाेच्च अदालतमा मानहानीको मुद्धा खेपिरहेका छन् । तर उनको दुर्मुखा शैली र प्रवृत्ति भने घटेको छैन , बरु नयाँ उँचाई लिंदोछ ।
ओलीले भने जस्तै तमासा चाहिं उनकै इसारामा अहिले प्रदेशसभामा देखिन थालेकाे छ । प्रदेश नं. १ र बाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको महिनौं भइसक्यो । तर यसबारे न त छलफल हुन्छ , न कुनै निर्णय प्रकृयामा नै लगिन्छ । अझै सत्ताधारी पक्ष नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने तमासा देखाइरहेको छ । तर ओलीलाई भने त्यो तमासा लाग्दैन ।
प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्न आजको लागि मिति तय गरिएको छ । तर प्रदेशसभा नै बस्नै नदिने राई पक्षीय सांसद्हरुको तयारी छ । सकेसम्म सूचना टाँसेरै बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दवाव दिएका थिए । आज बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा सभामुखलाई बोलाएर उनले बैठक स्थगित गर्न भने । तर सभामुख भण्डारीले अस्वीकार गरे । त्यसैले आज बैठक बस्ने भएको छ ।
यद्यपि ओली पक्षधर सांसद्हरु भने बैठक अवरुद्ध गर्ने पक्षमा छन् । उता, बाग्मती प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ । यहाँ अर्काे तमासा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको दुई महिना नाघ्नै लाग्यो । तर यसबारे संसदमा छलफल नै थालिएको छैन । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ सूचना टाँसेरै लगातार बैठक स्थगित गरिरहेका छन् ।
अस्ति फागुन ५ गतेका लागि बैठक तय भएको थियो । तर सभामुख श्रेष्ठले विहानै कसैसँग सल्लाहसमेत नगरी एकपक्षीय रुपमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिदिए । यसैगरी बैठक छलेर नै अभिष्ट पूरा गर्ने पक्षमा ओली समूह देखिएको छ । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राईले त सरकारलाई असयोग गरिए प्रदेशसभा नै भंग हुने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
वामदेवले एकताको पक्षमा नआउने नेतालाई भोट नदिने ८ घण्टा पहिले
प्रचण्ड-नेपाल समूह फेरि निर्वाचन आयोग जाने ९ घण्टा पहिले
विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई छाड्न गृहकाे सर्कुलर १० मिनेट पहिले
कञ्चनपुरमा प्रहरी र तस्करबीच भिडन्त, गोली लागेर भारतीय तस्करकाे मृत्यु ४३ मिनेट पहिले
ड्रेस टु इम्प्रेस सिजनमा ११५ जना डिजाइनरले प्रतिस्पर्धा गर्दै ५ घण्टा पहिले
निर्माणाधिन घरको छतबाट खसेर मजदुरको मृत्यु १० घण्टा पहिले
महाशिवरात्रिलाई मध्यनजर गर्दै शनिबार वाग्मती सफाइ गरिने १५ घण्टा पहिले
विघटनअघिका ३२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदै ४ दिन पहिले
म खाऊँ मै लाऊँ भन्ने भावना त्याग्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान ३ दिन पहिले
पत्रकारले कोभीड खोपबारे गलत हल्ला फैलाए : डा. सबिता १ दिन पहिले
वसन्तपुर क्षेत्रका अनधिकृत पसलहरु हटाउन सात दिने अल्टीमेटम, नटेरे कारवाही २ दिन पहिले
कांग्रेस नेता रानाभाटको निधन, डा. शेखरद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त १ हप्ता पहिले
गस्तीमा गएका एक प्रहरी जवानको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु ३ हप्ता पहिले
ताप्लेजुङ आगलागी विस्थापितलाई भूकम्प पीडितसरह सहयोग माग २ दिन पहिले
भारतमा कोभिड खोप एक करोड भन्दा बढीले लगाए २ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री ओली आज अदालत जाने २ हप्ता पहिले
चितुवाले आक्रमण गर्दा फेरि एक किशोरी मृत्यु ४ महिना पहिले
युभेन्ट्सले जित्यो सीरी ए फुटबलको उपाधि ७ महिना पहिले
आज उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अष्ट्रिया जाँदै २ वर्ष पहिले
खच्चडबाट निमार्ण सामाग्री लैजाँदै ३ महिना पहिले